16-jirkii ka danbeeyay dilka Yacquub iyo Tone oo 11 sano oo xabsi ah lagu xukumay - NorSom News
16-jirkii ka danbeeyay dilka Yacquub iyo Tone oo 11 sano oo xabsi ah lagu xukumay
Maxkamada magaalada Kristiansand ayaa maanta 11 sano ah oo xabsi ah ku xukuntay 16-jirkii norwiijiga ahaa ee ka danbeeyay dilka Yacquub Abdullahi Hassan iyo Tone Illebek. Xukunkan 11-ka sano ah ayaa hal sano ka badan kii 10-ka sano ahaa ee uu maxkamada ka codsaday dacwad oogaha kiiska kusoo oogay 16-jirkan norwiijiga ah.
16-jirkan norwiijiga ayay maxkamadu ku xukuntay inuu ugu yaraan guto 7 sano iyo afar bilood oo xukunkaas kamid ah, waxaana mar kale dib loo qiimeyn doonaa inuu mujtamaca khatar ku yahay marka uu dhameysto mudadaas 11-ka sano ah ee lagu xukumay.
16-jirkan ayaa bilowda bishii Desember si arxan daro ah magaalada Kristiansand ugu dilay Yacquub Abdullahi Hassan oo ay aqoon ka dhaxeysay iyo Tone Ilebekk oo isku dayday inay soo kala dhexgasho.
Previous articleHooyada gabadhii shaley ku geeriyootay isbitaalka oo xabsiga la dhigay
Next articleTalyaaniga oo ku hanjabay inuu dekadaha ka xiran doono maraakiibta soo badbaadiya tahriibayaasha
Norwiijiyaanku kalsooni iskuma qabaan, marka arrintan laga hadlayo.
Xisbiga Frp oo dhexdiisa madaxa iskula jiro.
Booliska oo lagu eedeeyay qaabkii ay uga jawaabeen weerarkii masaajidka Bærum.